Uhlelo lwabadali beLucidPix
Sihlala sisebenzela ukukhulisa iphalethi lakho lokudala ngezifanekiso ezintsha kanye nezici. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zozimele ze-3D ezisebenzayo, indawo, ebheke ubuso kanye nezinye eziningi. Uma ukuzithoba kwamukelwa, sizokulandela ngokuqala kohlaka lwakho ukuze ukwazi ukuthwebula nokwabelana.
Hlala ufunda ukuze ufunde ukuthi ungawakha kanjani amafreyimu we-3D step-by-step, futhi uhambise okwakho ekugcineni kwaleli khasi!
Ngeke silinde ukubona ukuthi wenzani. Ukudala okujabulisayo!
Ungawakha Kanjani Amafreyimu we-3D
Noma ngubani angakwazi ukukala Uhlaka lwe-3D futhi aluthumele ukuze athole ithuba lokufakwa njengohlaka olusemthethweni kuhlelo lokusebenza lweLucidPix. Uhlaka ngalunye lwe-3D lwakhiwe kusuka ezintweni ezimbili ezihlukile; isithombe esijabulisayo nemephu ejulile yokuchaza. Imininingwane ephelele itholakala ngezansi.
Isithombe Esinikezwe Umsebenzisi
Akunasidingo sokwenza noma yini lapha, lesi sithombe sinikezwe uMsebenzisi.
3D Uhlaka lwesithombe
Wakha lolu hlaka, uqiniseka ukuthi ushiya izindawo zesithombe sabasebenzisi ezizokhonjiswa. Gcina njengefayela le-.png elisobala.
Okulandelayo, udala imephu yokujula esuselwe esithombeni sakho se-3D. Khetha kusuka kumazinga ayi-5 ajulile. Gcina njengefayela le-.png elisobala.
Uhlaka lokugcina lwe-3D
Sifaka imephu yokujula ku-3D Uzimele kanye nesithombe somsebenzisi, ukunika amandla i-3D animation yendalo yakho entsha!
Imininingwane Yohlaka lwe-3D
Ngenkathi ukudala ama-Frames we-3D kulula, kunezinkomba ezimbalwa okufanele uzikhumbule.
Ukuhanjiswa ngakunye kwe-3D Uzimele kufanele kufake izinto ezintathu ezilandelayo; (1) Uhlaka lwe-3D, (2) Imephu yokujula, kanye (3) Isithonjana. Ukuhambisa okungaphelele noma okungalungile ngeke kucatshangwe ukufakwa kohlelo lokusebenza.
Ingxenye yesithombe yohlaka lwakho lwe-3D
Ubukhulu: 1440 × 1744
Uhlobo lwefayela: .png
Igama lefayela: igama.png
Umbala: umbala ogcwele
(0,0,0 & 255,255,255 akuvunyelwe)
Isizinda se-alpha esobala
Kusetshenziselwe ukuchaza ukujula kuhlaka lwakho lwe-3D
Igama lefayela: name_depth.png
Umbala: mono, akukho okusobala
1, 1, 1 = kude kakhulu
254,254,254 = okusondele kakhulu
Ukuphakama Kwemephu Yezakhiwo
Imephu Yakho yokujula yisithombe esimpunga esinemibala efinyelela ku-5.
Imibala elula ukukhanya isondele, imibala emnyama iyedlula.
Akunagradi noma obala, imibala eqinile kuphela.
Uhlobo oluncane lohlaka lwe-3D
Igama lefayela: name_thumb.png
Ungabheka kanjani kuqala uhlaka lwakho olusha lwe-3D ku-Facebook
Sicela uqiniseke ukuthi ubuka kuqala okudala kwakho ku-Facebook ngaphambi kokuthumela ukuze kucatshangelwe.
Dala uhlaka lwakho lwe-3D neMephu yokujula.
Khetha isithombe sangemuva ngezinjongo zokuhlola.
Beka Uhlaka lwakho lwe-3D ngaphezulu kwesithombe sokuhlola nokukhipha njengefayela le-.png.
Ukuqanjwa kwamafayela kubalulekile. Amafreyimu we-3D angaba nanoma yiliphi igama, isib. "Igama.png". Imephu yokujula kufanele ibe negama elifanayo elinegama elithi "_depth" ekugcineni, isib. "Name_depth.png"
Faka amafayela womabili kokuthunyelwe okukodwa ku-Facebook ukuze ubuke kuqala.
Thumela amafreyimu wakho we-3D
Sicela u-zip the (1) Isithonjana, (2) Uhlaka lwe-3D kanye (3) neMephu yokujula kufayela elilodwa bese unamathela kwifomu elingezansi.
Awunasiqiniseko sokuthi ungayakha kanjani Uhlaka lwe-3D yeLucidPix? Ayikho inkinga! Bheka umhlahlandlela ongenhla!
Uyacelwa ukuthi uqiniseke ukuthi ifayela lakho le-zip liqukethe zonke izinto ezintathu: Isithonjana, Uhlaka lwe-3D neMephu Yokubanzi. Ngokuthumela uhlaka lwe-3D uyavuma ukuthobela Isivumelwano sohlelo lwabadali, esichazwe ngezansi.
Isivumelwano Sohlelo Lwabadali beLucidPix
Imihlahlandlela Yokuhanjiswa Kohlaka lwe-3D
Isidingo seminyaka: Kufanele ube neminyaka eyi-18 noma ngaphezulu ukuze uthumele okuqukethwe ku-LucidPix.
Okuqukethwe kwakho: I-LucidPix ayifuni noma yimaphi amalungelo obunikazi ngaphandle kwelayisense osinikeza yona kulesi sivumelwano. Uyavuma futhi ukuthi weqa umthetho wobumfihlo, amalungelo wokuziphatha, noma amanye amalungelo abanye.
Amafayela adingekayo: Ukuhambisa ngeke kubhekwe uma kungafaki wonke amafayela amathathu adingekayo; Uhlaka lwe-3D, Imephu yokujula, ne-Isithonjana kufakwe kufayela elilodwa. Uma kudedelwa ukukhululwa (imodeli, impahla yobuhlakani, njll), sicela ufake phakathi kwifayela lokungenisa le-zip.
Ukuguqulwa kwesivumelwano: Sinelungelo lokushintsha lesi sivumelwano nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwemvume ebhaliwe yangaphambilini. Noma iziphi izinguquko ezenziwe zizosetshenziswa ngokushesha. Uma ungavumelani nanoma yiluphi ushintsho olwenziwe, kufanele usazise ngokubhala ku- creators@lucidpix.com futhi sizosusa okuqukethwe kwakho kuWebhusayithi yethu kanye / noma kuhlelo lokusebenza.
Uma sibona imisebenzi enqatshelwe ehlobene nokuthunyelwa kokuqukethwe, sizokwenqaba ukuthunyelwa okushiwo.
Ezinye izibonelo zemisebenzi enqatshelwe yilezi:
Ogaxekile bokuqukethwe, njengokuthumela okuningi kwamafayela afanayo, noma acishe afane
Kukopishwa amafayela wabanye abaculi
Ukuhambisa okuqukethwe kwesizinda somphakathi, noma okuqukethwe okungadaliwe nguwe
Ukuhambisa ukwephula i-IP, okungekho emthethweni, noma okuqukethe ezocansi
I-copyright: Kufanele ube ngumnikazi noma ulawule wonke amalungelo amafayela owahambisa kuLucidPix. Ungathumeli amafayela okungewona awakho (ngokwesibonelo, izithombe ezathathwa ngumlingani wakho) noma ezifaka izinto ezingezona ezakho, njengokuqukethwe okutholakale ku-inthanethi.
Imithetho yasekhaya neye-federal: Kufanele ulandele imithetho yasekhaya neye-federal lapho udala futhi uhambisa okuqukethwe ku-LucidPix. Asikwamukeli okuqukethwe okungekho emthethweni, izithombe ezingcolile noma zokuziphatha okubi.
Amafomu wokukhishwa: Okunye okuqukethwe kungadinga imodeli kanye / noma ukukhishwa kwempahla. Uma kudingeka, sicela ufake ukukhululwa ku-zip yokuhambisa.
Imininingwane yomuntu siqu: Ungashumeki ama-logo akho uqobo noma enkampani, i-watermark, igama, noma olunye ulwazi olunjalo kumafayili akho.
Ubunqunu: Asemukeli ozimele kufaka noma yiluphi uhlobo lobunqunu.
Sigodla ilungelo lokwamukela, ukwenqaba, noma ukususa amafayela nganoma yisiphi isizathu, nganoma yisiphi isikhathi.
Isivumelwano Somnikeli seLucidPix
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Okthoba 11, 2019. Esikhundleni sazo zonke izinhlobo zangaphambilini.
Lesi sivumelwano silawula ukusetshenziswa kwakho kohlelo lwabadali beLucidPix kanye nokulayishwa noma ukuhanjiswa kwanoma yimuphi uMsebenzi kuLucidPix. Lesi sivumelwano sisebenza kuzo zonke izithombe, imifanekiso, izithombe, izifanekiso, impahla ye-3D, neminye imisebenzi engokomfanekiso noma yemifanekiso oyithumela kithi noma oyilayishe kwiWebhusayithi lethu ngaphansi kwalesi sivumelwano noma olunye uhlobo lwangaphambilini lwayo (“Work (s))”. Lesi Sivumelwano Somnikeli sibizwa ngokuthi “Isivumelwano”. “Iwebhusayithi” isho amawebhusayithi ethu kanye nezicelo ezenza ukuthi akwazi ukufinyelela kulawa mawebhusayithi noma athumele ama-Frames we-3D, kufaka phakathi kodwa kungagcini ku-lucidpix.com, kanye nohlelo lwethu lokusebenza lweLucidPix lwe-iOS ne-Android.
1. Amalayisense Abasebenzisi. Usinikeza ilayisense yokuqhubekisela phambili ilungelo lethu lokusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukubonisa esidlangalaleni, ukusabalalisa, ukuguqula, ukwenza esidlangalaleni, nokuhumusha uMsebenzi ngokungakhetheki, emhlabeni jikelele, nangasisekelo sanoma iyiphi imidiya noma ukuhlanganisa. Ilayisense eya kubasebenzisi ingafaka ilungelo lokushintsha futhi lidale imisebenzi etholakala kususelwa eMsebenzini, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho ilungelo lokuthengisa noma lokusabalalisa ukuthengisa Umsebenzi noma okunye ukukhiqizwa kwalo uma kufakiwe noma kuhlangene noma kwa entweni ethile yokuthengisa noma omunye umsebenzi wokubhala, kunoma iyiphi imidiya noma ifomethi manje noma ngemuva kwalokho, uma nje ukusetshenziswa kwabasebenzisi kwalowo msebenzi oguquliwe kuncike ekusebenziseni okufanayo okuvunyelwe maqondana nomsebenzi woqobo. Ukucaciselwa, singavumela abasebenzisi kanye nabanye abantu abagunyaziwe (njengokuthi, ngaphandle komkhawulo, abathengisi bezentengiso noma abahlinzeki bezinsizakalo) ukuthumela noma babelane nge-Work kumasayithi wezinkundla zokuxhumana noma amanye amawebhusayithi avela eceleni, ngokuya nganoma yimiphi imikhawulo ebekwe Umsebenzisi Isivumelwano.
2. Amalayisense weLucidPix. Usinikeza ilayisense engakhethi, eyomhlaba jikelele, engapheli, futhi yasebukhosini yokusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukusabalalisa, inkomba, kanye nokuguqula Umsebenzi wakho ngezinhloso zokusebenza kweWebhusayithi noma i-App; ukwethulwa komsebenzi wakho; ukusabalalisa nokukhangisa Umsebenzi wakho kubasebenzisi; ukuthuthukisa izici ezintsha nezinsizakalo; ukufaka kungobo yomlando Umsebenzi wakho; futhi uvikele Umsebenzi wakho. Singahle sisebenzise lo msebenzi ngezinhloso zokumaketha nokukhuthaza umsebenzi wakho, iwebhusayithi, ibhizinisi lethu, neminye imikhiqizo kanye nezinsizakalo zethu, lapho usinikeza khona ilayisense elingasebenzisi kuphela, lomhlaba wonke nelobukhosi lokusebenzisa, ukukhiqiza kabusha , bonisa esidlangalaleni, usabalalisa, uguqula, usebenze esidlangalaleni, futhi uhumushe Umsebenzi njengoba kudingeka. Ungasinikeza nelungelo, kepha hhayi isibopho, ukusebenzisa igama lakho lokubonisa, uphawu lwentengiso, namagama okuhweba maqondana nokumaketha kwethu nemisebenzi yokuphromotha nelayisense yethu ku-Umsebenzi wakho ngaphansi kwesivumelwano. Uma sisebenzisa uMsebenzi wakho ukumaketha siphinde sithuthukise uMsebenzi wakho noma iwebhusayithi, izinhlelo zethu zokuhambisa, izinsizakalo zethu nokunikela, noma amasayithi ethu ezokuxhumana, noma ukwandisa imakethe ngokuthola ilayisense yoMsebenzi, khona-ke singakunxephezela ngokubona kwethu .
3. Amalungelo Wempahla Yengqondo
3.1 Amalungelo e-IP. Umela futhi uqinisekisa ukuthi ungumnikazi wawo wonke amalungelo, isihloko kanye nentshisekelo kuwo kanye nomsebenzi, okubandakanya wonke amalungelo okushicilela, izimpawu zokuthengisa, amalungelo obunikazi, amalungelo obumfihlo, amalungelo omphakathi, amalungelo wokuziphatha, kanye namanye amalungelo okuphathelene (kuhlangene, "Amalungelo e-IP") , noma unawo wonke amalungelo adingekayo nelayisense yokusinikeza amalayisense ngaphansi kwesivumelwano. Ukhipha ngokuqondile noma yimaphi amalungelo wokuziphatha maqondana nomsebenzi kuze kuvunyelwe umthetho, futhi uma kungavunyelwe ukuvuma, uyavuma ukungasebenzisi amalungelo aphambene nathi, abasebenzisana nathi nabasebenzisi bethu. Ubuye futhi umelele futhi uvume ukuthi uMsebenzi ngeke wephule amalungelo we-IP wabanye, aqukethe imininingwane edukisayo noma yamanga, noma aqukethe noma yikuphi okuqukethwe okungekho emthethweni noma okungcolile. Ngeke ulayishe noma yimuphi umsebenzi owephula noma wephule amalungelo we-IP wanoma yimuphi umuntu noma inhlangano noma owakha noma ngubani okhipha inhlamba, ukunyundela, noma okunye ukungcola komunye umuntu. Kufanele futhi uhambisane nomthetho osebenzayo, kazwelonke nowasekhaya.
Ukukhishwa. Uma umsebenzi uqukethe isithombe noma ukufana komuntu okuhloniphayo, uphawu lokuhweba noma uphawu lwentengiso, noma impahla ethile ehlukile evikelwe amalungelo we-IP, umele futhi uqinisekise ukuthi uthole konke ukukhishwa okuvumelekile noma okuvumelekile okufana kakhulu nemodeli yethu ejwayelekile futhi ukukhishwa kwempahla yomuntu ngamunye noma impahla ekhonjiswe eMsebenzini.
4. Ubunikazi Nokusetshenziswa Komsebenzi. Akukho sihloko noma yibuphi ubunikazi obunentshisekelo kubo noma eMsebenzini abudluliselwa kithi ngenxa yesivumelwano. Ngaphandle kwamalayisense anikezwe nguwe ngokuya ngeSivumelwano, asifuni amalungelo wobunikazi eMsebenzini. Sobabili thina nabasebenzisi bethu abasebenzisa uMsebenzi sinelungelo, kepha hhayi isibopho, ukukuveza njengomlobi nomthombo woMsebenzi ngendlela yesiko. Ngaphezu kwalokho, imethadatha ingaguqulwa, isuswe, noma ingezwe, ngaphandle kwesikweletu kithi, abasabalalisi bethu, noma abasebenzisi. Asinacala ngokulandela umthetho wesivumelwano somsebenzisi noma ngokusetshenziswa kabi yinhlangano yangaphandle. Usinikeza ilungelo lokuphoqelela amalungelo akho e-IP kubahlukumezi, kepha asinasibopho sokwenza kanjalo. Uma ukholelwa ukuthi Umsebenzi wakho usetshenziswe kabi, uyavuma ukusazisa futhi ungenzi sinyathelo ngaphandle kwemvume ebhaliwe yangaphambilini.
5.1 Imininingwane yamanani nentengo. Okwamanje ngesikhathi, asinalo uhlelo lokukhokha olwakhelwe ama-Frames we-3D, futhi ama-3D Frames angeniswe ngumsebenzisi ngeke athole isinxephezelo semali ngokufakwa kwawo kuWebhusayithi noma kuhlelo lokusebenza. Lokhu kungashintsha ngokuzayo. Singaguqula imininingwane yamanani nentengo ngokukhokha ngezikhathi ezithile, kufaka phakathi kepha kungagcini ekuvuseleleni izigaba zomsebenzi, ukubuyekeza imininingwane yamanani nesivumelwano sokukhokha, kanye / noma ukukuqondisa kumininingwane emisha nentengo yemininingwane yokukhokha. Kufanele ubheke imininingwane yamanani nentengo njalo. Ngokuqhubeka ngokuhambisa noma ukulayisha iMisebenzi noma ngokususa iMisebenzi, uvumelana nanoma iyiphi imininingwane emisha yamanani nentengo njengokuvuselelwa ngezikhathi ezithile. Ngaphandle kokuthi njengoba kushiwo kulesi sivumelwano, asinazibopho zokukhokha kuwe. Singahle sisebenzise izinqubo zokukhokha ezivela eceleni ezifana ne-PayPal ukwenza lula inkokhelo kuwe. Uma thina noma abalingani bethu sinikezela ngokunyusa, isivivinyo, isivivinyo, noma uhlobo olubunjiwe loMsebenzi wakho, asikho ngaphansi kwezibopho zokukhokha ezikulesi sigaba.
5.2 Izintela. Unesibopho sokugcwalisa noma yiziphi izinhlobo ze-IRS ezidingekayo ukuze uthole inkokhelo. “Umuntu wase-US” (njengoba echazwa yi-IRS) kufanele alethe ifomu le-IRS W-9 eligcwalisiwe kithi. “Umuntu Wangaphandle” (njengoba kuchazwa yi-IRS) kufanele alethe ifomu le-WS 8 eligcwalisiwe ukuze afune isilinganiselo esincishisiwe, noma sokuxolelwa ekubambeni njengezwe elihlala kwelinye izwe eleMelika. isivumelwano sentela. Uma kukhona imali oyikhokhayo engaphansi kokubanjwa kwentela noma enye intela eqoqwe emthonjeni nganoma yisiphi isiphathimandla sentela, sizodonsa leyo ntela ekhokhwayo oyikhokhela. Sizokwenza imizamo efanelekile ukukunikeza ikhophi lerisidi elisemthethweni elithatha leyo nkokhelo yentela, uma ngabe lelo khophi litholakala. Sizosebenzisana kahle nawe ukuze sithole izinzuzo zanoma yiziphi izivumelwano zentela ezisebenzayo eziphathelene nezintela ezinjalo.
6. Ukuhambisa, Ukuhambisa, kanye Nokuphatha Umsebenzi Wakho
6.1 Ukuhambisa nokuthumela Umsebenzi Wakho. Uzokwethula Umsebenzi wakho ngefomethi (s) nangendlela yokuthumela kwezidingo eceliwe yiLucidPix. Ngokwengeziwe, uzothumela Umsebenzi ukuze ubuyekezwe ngokuya ngemihlahlandlela enikezwe thina kithi. Singaguqula imihlahlandlela ngezikhathi ezithile. Kufanele ubheke imihlahlandlela njalo. Singemukela noma senqabe Umsebenzi owulayisha kwiWebhusayithi noma usithumele ngenye indlela, ngokubona kwethu, ngaphandle kokuphawula.
6.2 Ukuphatha Umsebenzi Wakho. Ungasusa noma yimuphi umsebenzi wakho kuwebhusayithi noma kuhlelo lokusebenza nganoma yisiphi isikhathi ngokuxhumana nathi nganoma creators@lucidpix.com nokunikeza isaziso esibhalwe phansi sezinsuku ezingama-90 kuLucidPix. Singasusa uMsebenzi noma sinqamule i-akhawunti yakho ngokubona kwethu ngaphandle kokwazisa kwangaphambili.
7. Izibopho Zembokodo. Uzosifaka thina kanye nezinkampani zethu ezingaphansi kwethu, abaxhumana nathi, izikhulu, ama-ejenti, abasebenzi, ababambisene nabo, amalayisense, abatshalizimali, kanye nabanikezeli bamalayisensi kunoma yisiphi isimangalo, ukufunwa, ukulahleka, noma ukulimala, kufaka phakathi izindleko zommeli ofanele, ezivela noma ezihlobene neMisebenzi yakho noma okunye okuqukethwe okuletha kithi, ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi, noma ukwephula kwakho isivumelwano. Sinelungelo lokulawula ukuvikela kwanoma isiphi isimangalo, isenzo, noma udaba olungaphansi kokubuyiselwa kuwe ngeseluleko nangendawo esizikhethele yona. Uzosebenzisana nathi ngokugcwele ekuvikeleni noma yisiphi isimangalo, isenzo, noma udaba. Noma iyiphi imali ekhokhwayo noma ongayikweleta yona ngaphansi kwesigaba 5 ngenhla ingasuswa futhi incishiswe nganoma iyiphi imali ephethwe nguwe ngokuya ngezibopho zakho zecala lokungezansi, ngaphandle kwesidingo noma isaziso kuwe.
8. Ukuqedwa kanye Ukusinda
8.1 Ukuqedwa. Singasinqamula lesi Sivumelwano, sisuse noma yimuphi Umsebenzi, noma simise i-akhawunti yakho ngaphandle kokuthola isaziso sangaphambilini. Ngeke sibe nesibopho sokukhokha kuwe uma sinqamula lesi sivumelwano ngesizathu. Ngokwesibonelo, awungeke ulande okuqukethwe kweLucidPix ngenhloso eyinhloko yokwandisa inani lokulandwayo kokuqukethwe ngumnikeli othile noma ngenhloso eyinhloko yokukhokha okwenziwa ngenhloso. Ungasinqamula lesi sivumelwano nganoma isiphi isikhathi okungenani ngezinsuku ezingama-90 ezibhaliwe ezibhalwe kithi nge-imeyili ku-aorsors@lucidpix.com. Sizosebenzisa imizamo efanelekile yokuthi noma yimuphi umsebenzi owususile kwiWebhusayithi yethu ukhishwe kumawebhusayithi wanoma yibaphi abahlanganyeli bethu (kufaka phakathi amawebhusayithi enophawu) ezinsukwini ezingama-90 ngemuva kokususwa koMsebenzi kwiWebhusayithi yethu. Ngaphambi kokumiswa kwalesi Sivumelwano noma ukususwa koMsebenzi wakho kuwebhusayithi yanoma yibaphi abaxhumana nathi, abasebenzisi bethu bangaqhubeka nokuthola amalayisense amasha eMsebenzini wakho.
8.2 Umphumela Wokunqanyulwa. Singaqhubeka nokusebenzisa lo msebenzi kuphela ngokugcina imininingwane yangaphakathi nezinjongo eziyisethenjwa noma njengoba kushiwo kulesi sigaba 8.2. Izigaba 3, 4, 5.1 (uma uLucidPix enezinye izibopho zokukhokha), u-5.2, 7, 8, no-9.1 uzosinda ekuqediwe kwalesi Sivumelwano. Noma yimaphi amalayisense anikezwe abasebenzisi bethu noma kithi ngaphambi kosuku lokuqedwa noma ngaphambi kokususwa kwanoma yimuphi Umsebenzi kuWebhusayithi uzosinda ekuqediwe kwalesi Sivumelwano. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi abanezivumelwano zomsebenzisi ezibavumela ukuba banelayisense futhi babe nohlobo lomsebenzi (isib. Isampula yokubuka kuqala) bangaqhubeka nokuguqula leyo layisense ibe ilayisense lokusebenzisa. Sizonikela ngokukhokha njengoba kushiwo esigabeni 5 nganoma iyiphi imali yelayisensi esiyithola njengokuhlobene nomsebenzi ngemuva kokumiswa kwalesi Sivumelwano.
9.1. Ubudlelwano. Uma uhlala e-United States, ubudlelwano bakho buneLucidPix, inkampani yase-United States.
9.2 Ezokuxhumana. Uyavuma ukuthi uLucidPix angaxhumana nawe nge-imeyili ukuze akwazi ukuxhumana nawe maqondana nezidingo zokuqukethwe zikaLucidPix nezindlela ezisebenzayo zokuthi sisebenzisane.